विश्वकप क्रिकेट : वेष्ट इन्डिज र बंगलादेश भिड्दै, पल्लाभारी कसको ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
विश्वकप क्रिकेट : वेष्ट इन्डिज र बंगलादेश भिड्दै, पल्लाभारी कसको ?
By नेपाली कान्छा on 6:48 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
२ असार, काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटमा आज वेष्ट इन्डिजले बंगलादेविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
इंग्ल्यान्ड र वेल्समा जारी विश्वकप क्रिकेटमा आज नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ बजेर १५ मिनेटमा वेष्ट इन्डिज र बंगलादेशबीचको खेल सुरु हुनेछ ।
बंगलादेश र वेष्ट इन्डिज दुवै टिमले दुई खेलमा हार, एक खेलमा जित र एक खेलमा भने अंक बाँडेका छन् । वेष्ट इन्डिजले आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै जित हात पारेको थियो । तर दोस्रो खेलमा अष्ट्रेलियासँग १५ रनले पराजित भयो । आफ्नो तेस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध भने पानी परेपछि रद्द भएसँगै अंक बाँडेको थियो । अर्को खेलमा भने वेष्ट इन्डिज इंग्ल्यान्डसँग आठ विकेटले पराजित हुन पुग्यो ।
यता, बंगलादेशले भने आफ्नो पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई २१ रनले पराजित गर्‍यो । तर आफ्नो दोस्रो खेलमा भने न्युजिल्यान्डसँग दुई विकेटले पराजित भयो । त्यस्तै, इंग्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा बंगलादेश १०६ रनले पराजित भयो । श्रीलंकाविरुद्धको खेल भने वर्षा भएपछि अंक बाँडेको थियो ।